MH ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - Ningbo MH
Ningbo MH စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအထည်ချုပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စက်ချုပ်ပစ္စည်းများအတွက်အထူးပြု, 1999 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နှစ်ကြာပြီးနောက် MH 150 နိုင်ငံများထက် ပို. နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပြီး, အမ်ကုမ္ပဏီ "ထိပ်တန်း 500 တရုတ်ဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ" အဖြစ်မှတ်ယူခဲ့ပါတယ်နှင့် "AAA ယုံကြည်စိတ်ချကုမ္ပဏီ" နှင့် "MH" ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှစ်ခုလုံးကိုပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဈေးကွက်၌ကြီးသောဂုဏ်သတင်းရ ။
16 နှစ်ပေါင်း '' ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူယခု MH, 3,500 ထမ်းကျော်ဘို့ 5tons / လမှစွမ်းရည်တက်ထုတ်လုပ်အတူ 382000 ကြီးမားသောထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း (စုစုပေါင်း 2m1500), ရှိပါတယ် အပ်ချုပ်ချည်အဘို့, 200tons / လ ပန်းချည်နှင့် 700,000y / လများအတွက် ထိုးဇါ ထည်။ MH ကိုလည်း၏ 1500 ကွဲပြားခြားနားသောကြင်နာထက်ပိုမိုထက်ပို 1000 ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို set up ချုပ်မယ့်ပစ္စည်းများ.
အခုတော့ MH ဖောက်သည်အမြန်တုံ့ပြန်မှုဒေသခံဝန်ဆောင်မှုပေးရန်, ကွဲပြားခြားနားသောတိုင်းပြည်တွင် 40 Oversea ရုံးများရှိပြီးသည်လည်းငါတို့ ERP, MH APP နှင့်အခြားအိုင်တီစနစ်, MH နေရာတိုင်းဖောက်သည်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဘူး။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ MH နှင့်အတူဘယ်လိုဖောက်သည်အဆက်အသွယ်, E-mail ကို, ဖက်စ်, တယ်လီဖုန်းအသုံးပြုပုံ APP ကို ​​IM ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာမှမျက်နှာ, ဖောက်သည်အမြဲအကျိုးရှိစွာ prompt ကိုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
MH Full-အမျိုးအစားနှင့်အတူဖောက်သည်ထောက်ပံ့ဖို့ချုပ်ရဲ့ပစ္စည်းနိုငျငံကိုဖန်တီးရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းပေါ်တွင်အချိန်ပေးပို့, သင့်လျော်သောအရည်အသွေးချုပ်ရဲ့ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များစေမည်။
အခမဲ့အဘို့အ App ကို
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြား site: MH Group မှ | MH Thread | MH ဇာပန်းထည် | MH ဖဲကြိုး & တိပ် | MH ဇစ် | MH Button လေး | MH အထည်အလိပ် | MH ကုန်စည်ဒိုင် | TATH Thread
MH ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် Home ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား --Threads --Zippers --Ribbon & တိပ် --Ropes --Laces --Buttons --Interlining တစ်ခုကိုချုံ့ခြင်း --Tassel & မြိတ် / --Tailoring ပစ္စည်းများ --Garments & ဆက်စပ်ပစ္စည်း --Sewing စက် & အစိတ်အပိုင်းများ --Fabric --Others ကြှနျုပျတို့အကွောငျး --MH ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် --MH စက်မှုဇုန် --MH သမိုင်း --Trade ရှိုးများ --Our ကိုယ်စားလှယ် --Image Galleries --Video အယ်လ်ဘမ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ --Office တည်နေရာ --Feedback အဝန်း --Blog --App --ငါတို့နဲ့လာပူးပေါင်းပါ